१३.९७ अंकले बढ्यो बजार, करीब १२ अर्बको शेयर कारोबार
यस दिन कारोबार खुला भएको पाँच मिनेटमै नेप्सेले हालसम्मको उच्च विन्दुलाई समेत पार गरेको थियो । नेप्सेले उच्च विन्दु कायम गरेसँगै नाफा बुक गर्नेहरु सक्रिय हुँदा बजार प्रभावित बनेको थियो । यस दिन ठूला कम्पनीहरुको कारोबार मापक सेन्सेटिभ इन्डेक्स भने स्थिर रहेको छ ।
सोमवार कारोबार रकम भने अघिल्लो दिनको भन्दा बढी भएको छ । यस दिन २१९ ओटा कम्पनीको १ लाख ७ हजार ७९७ पटकको व्यापारमा रू. ११ अर्ब ८१ करोड ३७ लाख ५४ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो । अघिल्लो कारोबार दिन आइतवार ३ दशमलव ३७ प्रतिशत बढेको बजारमा रू. ११ अर्ब ६३ करोडभन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको थियो ।
सोमवार एनआईसी एशिया बैंकको सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार भएको छ । बैंकको रू. ३५ करोड ४१ लाख ६६ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो । यस दिन बैंकको शेयरमूल्य भने १ दशमलव ८८ प्रतिशत अर्थात प्रतिकित्ता रू. २० दशमलव २० ले घटेर अन्तिम मूल्य रू. १ हजार ४४ कायम भएको छ ।
यस दिन व्यापारिक समूहको परिसूचक सर्वाधिक ५ दशमलव २२ प्रतिशत बढेको छ भने वित्त समूहको सर्वाधिक १ दशमलव १७ प्रतिशतले घटेको छ । यस दिन सिनर्जी पावरको शेयरमूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ भने विशाल बजार कम्पनीको ९ दशमलव २० प्रतिशतले बढेको छ ।
सिनर्जी पावरको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ४६ दशमलव ८० ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ५१४ दशमलव ८० र विशाल बजार कम्पनीको प्रतिकित्ता रू. ५२० ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. ६ हजार १७० कायम भएको हो ।